6 Siyood oo Fudud oo Lagu Joogo Badqabka Onlayn - UnMask Nov
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Boostada martida » 6 Siyood oo Fudud oo Lagu Joogo Badbaado onlayn ah – UnMask Nov
Internetku waa qalab cajiib ah oo bedelay habka aanu ganacsiga u samayno, la xidhiidho asxaabta iyo qoyska, ka hel macluumaadka dhammaan noocyada mawduucyada, sidaas darteed, noqoshada qayb weyn oo ka mid ah nolol maalmeedkeena. Marka loo eego qiyaasaha, hadda waxaa jira in ka badan laba bilyan oo qof oo isticmaala internetka adduunka oo dhan, ku dhawaad ​​​​kalabar dadka ku nool waddamada horumaray sida Australia, Canada, iyo New Zealand ayaa horeba online uga ahaa. Taasi waa dad badan!
Si kastaba ha ahaatee, hal saameyn oo ay tani leedahay ayaa ah inay adkaan karto inaad naftaada ilaaliso markaad internetka ku jirto. Maqaalkan, waxaan ku dul mari doonaa lix siyaabood oo fudud oo dadku ku badbaado inta ay dhex wareegayaan shabagga!
Adeegso VPN marka aad Online joogto
VPN-ku wuxuu kuu ogolaanayaa inaad sirayso taraafikadaada interneedka oo aad ahaato qarsoodi markaad dhex wareegayso shabakada. Shabakadda gaarka loo leeyahay waa tunnel sugan oo u dhexeeya laba goobood oo kala duwan oo internetka ah, kaas oo u oggolaanaya isticmaaleyaasha in ay xannibaan waxyaabaha xaddidan juqraafi ahaan iyaga oo u muuqda in ay waddan kale joogaan. Adigoo isticmaalaya adeega VPN, waxaad si wax ku ool ah u qarin kartaa goobtaada oo aad ka ilaalin kartaa dhaqdhaqaaqaaga onlaynka ah indhaha dhinacyada saddexaad sida ISPs ama hackers. Marka lagu xidho server kasta oo kale oo dadweyne iyada oo aan la ilaalin sirta, si kastaba ha ahaatee, dhammaan waxa qofka wax weeraraya uu awoodi doono inuu arko waa farriimaha sir ah ee lagu soo dirayo adiga iyo shabakadaha aad isku dayayso inaad ka gasho server-yada wakiillada ah ee agagaarka adduunka-ma aha cidda mareegahaas run ahaantii iska leh! Marka, habkan amniga ah, waxaad ku nasan kartaa in macluumaadkaaga khaaska ah uu ahaan doono mid la ilaaliyo.
Isticmaal xaqiijinta laba-tallaabo
Tusaale ahaan, haddii aad leedahay akoon Gmail ah iyo akoon Facebook ah oo ku xidhan isla ciwaankaas emailka ah, marka aad gasho bogga Account-ka Google-ka, waxa aad noqonaysaa fursad aad ku gasho hal gujin oo kaliya talefankaaga labada adeegba. Si kastaba ha ahaatee, si ka duwan soo kabashada erayga sirta ah, kaas oo isticmaala kaliya su'aalaha xaqiijinta fudud, xaqiijinta laba-tallaabo waxay kaaga baahan tahay inaad geliso lambarkaaga telefoonka. Kadib, markaad gasho adeegaas gaarka ah hal gujin oo kaliya, shabakadu waxay si toos ah ugu soo diri doontaa kood SMS taleefankaaga gacanta. Marka aad si guul leh u hesho fariintan oo aad ku qorto foomkooda Bogga xisaabta Google, waxaad gali kartaa dhibaato la'aan.
Tani waa tusaale ahaan sida xaqiijinta laba-tallaabo u shaqeeya xisaabaadka warbaahinta bulshada maadaama goob kasta oo online ah ay leedahay siyaabo kala duwan oo loo isticmaalo cabbirkan dheeraadka ah ee amniga; si kastaba ha ahaatee, dhamaantood waxay raacaan fikrad la mid ah sida kor lagu soo sheegay halkaas oo ay jiraan tallaabooyin ammaan oo fudud iyo mid horumarsan labadaba kuwaas oo ka caawiya ilaalinta macluumaadka shakhsi ahaaneed ee internetka ee isticmaala malware ama xadista furaha sirta ah ee isku-dayga phishing.
Ka fogow shabakadaha laga shakiyo
Mareegaha shakiga leh waa in laga fogaado sababtoo ah waxay ka kooban yihiin waxyaabo waxyeello leh ama malware kuwaas oo waxyeello u geysan kara kombiyuutarkaaga haddii aad booqato bogaggan. Tusaalooyinka mareegaha shakiga leh waxaa ka mid ah dukaamada internetka oo leh "aad u wanaagsan inay run noqoto" qiimaha iyo xayaysiisyada alaabooyinka sida xalalka miisaanka oo yaraada kuwaas oo ballanqaadaya natiijooyin cajiib ah iyada oo aan loo baahnayn jimicsi ama cunto. Inta badan, sida kaliya ee lagu go'aamin karo in mareegaha badbaadsan yahay iyo in kale waa in la hubiyo URL-kiisa; Wax kasta oo kale ayaa aqoonsigaaga khatar gelin kara oo kombuyuutarkaaga ku qaadi kara software xaasidnimo ah (furin). Bogagga mareegaha shakiga leh ayaa sidoo kale laga yaabaa inay isticmaalayaasha ka fogeeyaan halka loogu talagalay iyada oo loo marayo xayeysiisyo ka kooban xiriiriyeyaal horseedaya bogag aan badbaado lahayn, sidaa darteed waa lagama maarmaan in la hubiyo barta ciwaanka ka hor intaadan dhagin xayeysiis kasta.
Si aad u ilaaliso aqoonsigaaga oo aad u ilaaliso amaanka kombayutarka, waxa fiican inaadan booqan shabakadaha laga yaabo inay khatar geliyaan malware-ka ama hawlo kale oo laga shakiyo. Sida kaliya ee lagu hubin karo badbaadada onlaynka waa in la hubiyo URL-ka mareegaha (ama ciwaanka shabakada); Haddii kale, isticmaalayaasha waxaa laga yaabaa in laga weeciyo meesha loogu talagalay iyada oo loo marayo xayeysiisyo ka kooban xiriiriyeyaal horseedaya bogag aan ammaan ahayn. Sidoo kale waa dhaqan wanaagsan inaadan waligaa gujin xayeysiisyada sababtoo ah kuwani waxay si toos ah ugu hogaamin karaan isticmaalayaasha shabakadaha khatarta ah kuwaas oo ku qaadi kara qalabkaaga software waxyeelo leh sida fayrasyada iyo spyware.
Ka digtoonow waxa aad ku soo qorto Online
Hubi inaad ka warqabto waxa aad ku dhejiso internetka. Tani waxay noqon kartaa khatar sababtoo ah lama tirtiri karo ama dib looma soo celin karo mar haddii ay wax soo gaareen internetka. Waxay weligeed ku noolaan doontaa onlayn qof kasta si uu u arko wakhti kasta mustaqbalka. Sidaa darteed, ka hor inta aanad dhejin wax ku saabsan wax kasta oo khuseeya sirta ama badbaadada qof kale, ka fikir sida ay tani u saamayn karto iyaga mustaqbalka fog haddii ay arkaan dhajintaada wadada oo ay kaa xanaaqaan sanado ka dib. Marnaba ma garan kartid cidda akhrin karta waxaad qorto!
Dhammaanteen waxaa nagu waajib ah inaan midba midka kale ilaalinno, marka waa inaan mas'uul ka ahaanno marka la isticmaalayo baraha bulshada sida Facebook, Twitter, iwm
Ka fakar laba jeer ka hor inta aanad isticmaalin Wi-Fi dadweynaha
Wi-Fi Dadweynaha aad ayuu khatar u yahay wuxuuna keenayaa khataro badan oo xagga ammaanka ah. Marka lagu xidho shabakad dadweyne, xogtaada waxaa loo soo bandhigi karaa siyaabo badan oo kala duwan.
Tusaale ahaan, marka aad isticmaalayso xidhiidhka bilaa-waayarka ah ee aan la hubin, waxa aad halis ugu jirtaa in qof uu raaco nooca mareegaha aad booqato, kuwaas oo khatar gelin kara sirtaada ama ay dhexgalaan macluumaadka xasaasiga ah sida nambarada kaadhka kreditka ee aan la qarin karin. Shabakadaha dadweynuhu waxay sidoo kale u nuglaadaan weerarrada ka imanaya hackers-ka kuwaas oo laga yaabo inay afduubaan xisaabaadka isticmaalayaasha aan waxba galabsan ama ku faafin malware-ka iyada oo la adeegsanayo qalabyada ka faa'iidaysiga browserka. Intaa waxaa dheer, haddii uusan jirin erayga sirta ah ee barta Wi-Fi-ga la wadaago, dadku ma ogaan doonaan inay ku xiran yihiin shabakadda saxda ah iyo in kale. Tani waxay la macno tahay inay ku dhamaan karaan inay la wadaagaan macluumaadka xasaasiga ah qof markaas arki kara xogtaas, taas oo u xun kuwa ku jira xidhiidhka dadweynaha sida madaarka, dukaanka qaxwaha, ama hudheelka.
Samee Baadh-Baari Naftaada
Baaritaanka taariikheed waa warbixin kooban oo laga soo aruuriyay diiwaanka dadweynaha. Warbixinahaan sida caadiga ah waxaa ka mid ah taariikhda dembiyada, xiriirka, iyo xubnaha qoyska, iyo sidoo kale faahfaahinta kale ee saameyn karta badbaadada noloshaada gaarka ah. Orodka a Baadhitaan taariikheed naftaada Waxay noqon kartaa hab aad u faa'iido leh oo lagu ururiyo aragti ku saabsan raadkaaga dhijitaalka ah oo aad hubiso inaysan jirin su'aalo aan laga jawaabin, dhammaadka dabacsan, ama xitaa lagu garto wixii macluumaad gaar ah oo suurtagal ah oo aan loo baahnayn oo internetka ah.
Marka aad adigu iska hubiso taariikhda soo jireenka ah, waxa lama huraan ah in aad dib ugu noqoto wakhtiga ugu fog ee suurtogalka ah. Tani waxay u oggolaan doontaa aragtidaada ugu dhammaystiran ee tagtaada waxayna ka hortagtaa macluumaad kasta oo waxyeello u geysan kara inay dib ugu soo baxaan waddada taasoo sababi karta dhibaatooyin fursadaha mustaqbalka sida helitaanka guri dabaq ah, shaqo, ama xitaa bilaabista xiriir cusub.
Dunida maanta, internetku waa qayb nolol maalmeedka dad badan. Si kastaba ha ahaatee, iyada oo ay bixiso faa'iidooyin iyo raaxo aan la tirin karin isticmaalayaasha, waxaa sidoo kale jira khataro ka yimaada isticmaalka adeegyada internetka.
Qaar ka mid ah hanjabaadaha ugu badan waxaa ka mid ah fayrasyada, malware, iyo khiyaanada phishingka. Hackers-ku waxa kale oo ay khatar ku keeni karaan isticmaaleyaasha iyaga oo jabsada qalabkooda fasax la'aan ama xadaan macluumaadka shakhsiyeed sida ereyada sirta ah iyo nambarada kaarka deynta. Dhib ma leh waxa aad ka raadinayso onlaynka, waxa muhiim ah in aad ka digtoonaato khatarahan in aanad saamayn ku yeelan khibradaada khadka ah.